Magetsi BHINJI KUPFUURA
ELECTRIC MOTO Bhasikoro
MAFUTA TIRE Magetsi bhasikoro
JIANGSU IMI PAMUSORO
Yakagadzwa muna 2013, Jiangsu IMI ine makore anopfuura masere 'ruzivo mukugadzirwa nekuparadzirwa kwemabhasikoro emagetsi. Sekambani, iri kurwira mhando uye inogara ichitsvaga kusimudzira, IMI iri kuenderera mberi nekudyara mari muzvivakwa zvayo zvine chekuita nekugadzira.
Muna Kurume 2018, iyo Kambani yakaisa mari itsva yakazara yekuunganidza mutsara kuti iwedzere huwandu hwekugadzira.
Yakagadzwa muna 2013, Jiangsu IMI ine makore anopfuura masere 'ruzivo mukugadzirwa nekuparadzirwa kwemabhasikoro emagetsi.
IMI Kambani ndeyekugadzira iwo ari nani emagetsi mabhasikoro emagetsi ekufambisa kwako. Nokubatana kwakadzama nekombiki yekucheka-tekinoroji, tinogona kupa yazvino fashoni bhasikoro remagetsi mupasirese. Isu tinovimbisa kugadzikana kwetekinoroji yedu nyowani.
CHIONO uye ZVINOKOSHA
Chiono chedu ndechekugara tichigadzira uye kuburitsa yakakwira mhando zvigadzirwa zvitsva zvinoenderana neZvinodiwa zviyero, uye kuve shamwari inodiwa kune vatengi vedu.
YEDU ZVAKAITIKA PRODUCTS
Isu tinopa akasiyana bhasikoro emagetsi; senge emagetsi edhorobha bhasikoro, emagetsi makomo bhasikoro, magetsi mujaho bhasikoro, yemagetsi nhumbi bhasikoro, kupeta emagetsi bhasikoro uye emagetsi mafuta bhasikoro etc.
ZVIMWE ZVINOKOSHA ZVINHU
Iyo ECOLITE ebike yakagadzirirwa yakasununguka, isina hanya yemabhasikoro emuguta uye inoratidza hunhu mukati mese.
Iyo EWAY (ikozvino muchizvarwa chayo chechitanhatu) imigwagwa yakatetepa yemagetsi bhasikoro kumusoro kwenzvimbo yedu yekugadzira yemhando dzemabhasikoro eguta.
GUTA E-Bhasikoro PRODUCTS
Mabhasikoro emagetsi anowedzera simba rako rekukweva uye kugona kwako kuita uye kuona zvimwe. Vintage e-mabhasikoro anoita kuti zviitike. Dzinokurumidza uye dzakatsetseka, zvine simba rinotarisirwa, uye bhatiri rinobviswa rinogara kwenguva refu iro rinowedzerazve chero panotengeswa imba.
48V Kupeta E-Bike
Iyo ine kumhanya kwepamusoro mamaira gumi nemaviri paawa, inorema angangoita mapaundi makumi maviri uye inomhanya pane lithium phosphate bhatiri iyo inogona kuzara zvizere mumaminitsi makumi maviri. Imotokari irudzi rutsva rwebhasikoro remagetsi, kubatanidza zvakanakira kupeta bhasikoro uye bhasikoro remagetsi.
36V Kupeta E-Bike
Yakashongedzerwa kupeta emagetsi bhasikoro nematani emidziyo mitsva, yakagadziridzwa 350 watt mota, ine simba uye inogara kwenguva refu 48v 10.4ah bhatiri, disc mabhureki.
Kupeta E-Bike PRODUCTS
Mabhasikoro ekupeta emagetsi ari kumera mumigwagwa yeguta, muzvitima nemabhazi, uye muzvivakwa zvemahofisi nepahoroji dzepamba nechikonzero chakanaka. Zvakaoma kurova zviri nyore zvebhasikoro iro origamis pasi kuti rikwane pasi petafura yako - asi zvinogona zvakare kuita kuti kufamba kwako kukurumidze uye kushome mutero. Makambani mazhinji uye akawanda ari kubatikana kugadzira iyo yekupedzisira mini-commuter muchina. Hezvino izvo zvekutarisa kana iwe uchida compact kompiki yemamultimodal ekufamba mazuva kana kuchengetera mufurati - uye zvakare uine refu rwendo.
7 kumhanya E-Bike
Iyo yemagetsi bhasikoro ELECTO ine simba e-bhasikoro ine yakanaka yemagetsi furemu chimiro. Iyo e-bhasikoro iri nyore kwazvo kushanda.
11 kumhanya E-Bike
Iwe uri mukutonga neColor LCD kuratidza iyo inokutendera iwe kuti usarudze padanho rerubatsiro runodiwa, ichiita iyo Roadstar yakakodzera kwete kwete chete furati, asiwo nzvimbo ine makomo.
Gomo E-bhasikoro PRODUCTS
Magetsi emabhasikoro emabhasikoro ndizvo zvese zvaunenge watoda nezve nzira yekukwira, asi zvimwe zvacho. Kuwedzera kumhanyisa. Mamwe masimba. Kure kure. Dzimwe nzvimbo. Asi Rail yakatodarika ipapo-ibhasikoro remagetsi remakomo rinokupa hukama hwehukama nemugwagwa. Magetsi-anobatsira emabhasikoro emabhasikoro anowedzera simba rako rekukwevera uku uchiwedzera huwandu hwemafaro auchazova nawo munzira. Enda kure, enda nekukurumidza, uye enda dzimwe nzvimbo pane e-MTB. Aya ndiwo e-mabhasikoro anoita kuti iwe unakidzwe nezvakawanda zvezvinhu zvese zvinoita makomo kuchovha.
Iyo ine simba ye350w yekumberi hub injini iyo inokwanisa kukanda aya mafuta tireti bhasikoro kumhanya kusvika pa30 km / h pane yakachena magetsi magetsi5-7hours yenguva yekuchaja uye dhizaini isina mvura inoita kuti bhasikoro rako rirambe riri nyore.
Iyo nyowani EFATI bhasikoro remagetsi inoitwa kuti ikunde ese marudzi emigwagwa, ese ari maviri akasununguka mumigwagwa yakavezwa uye isiri-mugwagwa.
Mafuta E-bhasikoro PRODUCTS
Yepamusoro-vhoriyamu matairi anokutendera iwe kumhanyisa yakaderera matai kumanikidza, uye yakaderera matai kumanikidza kazhinji kazhinji kunounza iwo akasununguka kukwira. Mafuta emabhasikoro ematairi anotora iwo mafungiro kusvika pakunyanyisa. Ipo iwe uchimhanya 60+ psi yebhasikoro yemumugwagwa, 40+ psi yehybrid, uye 20+ psi yebhasikoro remakomo, mafuta mabhasikoro anokutendera iwe kuchovha neashoma se5 kusvika 10 psi mumatai ako. Iwe uchazoda kuwedzera kumanikidza kwenzira uye kubvisa mhepo yekukwira-munzira, asi kuderera kwese mukumanikidza kwetaya kunotendera matai kumanikidza pamusoro pemabhonzo, kugadzirisa iko kukwira kwako.
Bhasikoro rakazara-akashongedzerwa emagetsi ane mafendera, mwenje wakasanganiswa, chiteshi chechaji cheUSB, uye rakakura rakashongedzwa kumashure.
Isu takagadzira iyo Escape kuti ive bhasikoro remagetsi chairo. Kutiza kwakajairika munzvimbo dzakasiyana siyana, kubva mukushinga kuenda kumigwagwa, munzira dzemumigwagwa monorail kuenda kunodzedzereka pamoto pakati pe wineries.
Cargo E-bhasikoro PRODUCTS
Kutakura e-mabhasikoro akashongedzerwa zvakakwana eakawanda-echinangwa e-mabhasikoro nema fenders, marambi akabatanidzwa, USB yekuchaja chiteshi uye hombe yakawanda-yechinangwa-kumashure kumashure furemu. Yakashongedzerwa neiyo nyowani yakawanda-inoshanda kumashure yakasanganiswa aluminium alloy furemu, inotsigira vana, nhumbi, kugadza bhasikiti.
JIANGSU IMI Magetsi EMOTO TECHNOLOGY CO., LTD